वसन्त childrenतुमा बच्चाहरूसँग गर्ने योजना | आज आमाहरू
वसन्त childrenतुमा बच्चाहरूसँग गर्ने योजना
मार्टा कास्टेलस | | सुझावहरू
वसन्त अन्त मा यहाँ छ। लामो दिनहरू यसको साथ आउँछ, तापक्रम बढ्छ र तपाईं घरबाट टाढा हुन चाहनुहुन्छ। एक हो बच्चाहरूसँग योजनाहरू बनाउन उत्तम मौसम, ताजा हावा सास फेर्न र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न। बच्चाहरू घरबाट बाहिर जान मन पराउँछन् र जाडोको वर्षा र खराब मौसमबाट तल्लीन हुन्छन्। यदि तपाईंसँग धेरै विचारहरू छैनन् भने हामी तपाईंलाई यीसँग प्रेरणा दिन्छौं वसन्त childrenतुमा बच्चाहरूसँग गर्ने योजना गर्दछ।
हामीले गर्नैपर्छ वसन्त योजना छनौट गर्दा ध्यान दिनुहोस् यदि बच्चाहरूलाई एलर्जी छ भने, जब यो वर्ष को समय हो जब त्यहाँ धेरै शूटहरू छन्। यदि तपाईंको बच्चाको मामला यस्तो छ भने, उनीहरूको औषधी आफैंमा लैजानुहोस्। योजना छनौट गर्दा अर्को कारक भनेको बच्चाको उमेर हो, किनकि केही योजनाहरू उनीहरूको लागि अधिक आकर्षक हुन्छन्। त्यसैले अब तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंको मोबाइल बन्द गर्नुहोस्, आफ्ना बच्चाहरूमा फोकस गर्नुहोस् र यस पारिवारिक समयको आनन्द लिनुहोस्। आउनुहोस् हामीहरू बच्चाहरूसँग वसन्त canतुमा बनाउन सक्ने योजना के-के हुन्।
पार्क र बगैंचा। स्पेनमा सयौं अद्भुत पार्क र बगैंचाहरू छन् जहाँ बच्चाहरूले रूखहरू र बोटहरू कसरी फूल्न सक्छन् भनेर देख्न सक्छन्। राम्रो मौसम र दिनको उज्यालो घण्टाको साथ, हामी धेरै घण्टा बनाउन सक्छौं र प्रकाश र र ofले भरिएको शानदार सेटिंगको मजा लिन सक्दछौं।
आउटडोर पिकनिक। घर बाहिरका सम्पूर्ण परिवारलाई खाने कस्तो राम्रो विचार हो। सँगै तपाईं एक परिवार को रूप मा आनन्द उठाउन एक शानदार खाना तैयार गर्न सक्नुहुन्छ। छायाँ भएको स्थान छनौट गर्नुहोस्, बच्चाहरू खेल्न सक्छन् र तिनीहरूले चाहानु भएमा थोरै डुलकी लिन सक्छन्।
सूर्य र हावा। यद्यपि समुद्र तटमा जान अझै समय भएको छैन, हामी साना दृश्यहरू बनाउन सक्छौं। हामी विचित्रको साथ हिड्न सक्छौं, समुद्री तटको बालुवामा हिड्न सक्दछौं यदि यो पोशाकमा छ, बालुवाको साथ खेल्न सक्छ, परिवार संग चित्र लिन सक्छ ... समुद्र तट तौलिए र swims सूट को लागी मात्र हैन, तपाईं अन्य रमाईलो योजनाहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एक परिवार को रूप मा। यदि तपाईं बस्नुहुन्छ समुद्र तट छैन भने, तपाईं नदी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
शहरी बगैंचा। बगैंचामा हेर्न र काम गर्न शहर जान आवश्यक छैन। अधिक र अधिक शहरहरूमा खाली ठाउँहरू छन् जहाँ शहरी बगैंचा छन् र तिनीहरूले तपाईंलाई कसरी रोप्ने र आफ्नै बगैचाको देखभाल गर्न सिकाउँछन्। तपाइँको शहर मा केहि छन् को लागी पत्ता लगाउनुहोस्, यो बच्चाहरु को लागी एक धेरै शैक्षिक गतिविधि छ र तिनीहरु संग एक महान समय हुनेछ।
एउटा रूख छान्नुहोस्। रूखमुनि तपाईंको परिवारसँग क्षणहरू साझेदारी गर्न कत्ति राम्रो स्मृति। तपाइँका बच्चाहरूलाई शानदार संसारहरूका बारेमा कथाहरू पढ्नुहोस्, जहाँ उनीहरू खेल्छन् र विश्व पत्ता लगाउँदछन्। जहाँ उनीहरू तपाईंलाई जिन्दगी कसरी काम गर्दछ सोध्छन्। त्यो रूख फेरि कहिल्यै रूख हुनेछैनयो तपाईंको रूख हुनेछ र यसले तपाईंको परिवारको सम्झनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बाइक चलाउन सिक्नुहोस्। कसले याद गर्दैन कि उसले कसरी बाइक चलाउन सिक्यो? हामी सबैको त्यो क्षण हाम्रो दिमागमा जलिरहेको छ। वसन्त एक आदर्श समय हो उनीहरूलाई कुनै बाइक चलाउन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण चीज सिकाउन। दिनहरू लामो छन् र हामीसँग हाम्रा बच्चाहरूसँग समय बिताउन अझ बढी समय छ।
आजीवन खेलहरू। तपाईंको बच्चाहरूलाई खेल्ने खेलहरू सिकाउनुहोस् जब तपाईं एक बच्चाको रूपमा रमाईलो गर्नुभयो। उहाँलाई डोरी, रबर, लुकाउन र खोजी गर्न, बल, मार्बल, माछा मार्न सिकाउनुहोस् ... ती खेलहरू जुन तपाईंको बाल्यकालको भाग हो र तपाईं पनि आफ्ना बच्चाहरूको खेलहरूको भाग बन्न चाहनुहुन्छ। एक पारिवारिक क्षण जुन तपाईं आजीवन सम्झनुहुनेछ।
प्रत्येक अवसरको लागि के आवश्यक छ ल्याउन सम्झनुहोस्। यद्यपि हामी सनबेटमा गइरहेका छैनौं, हामी बच्चाहरू र वयस्कहरू दुवैको लागि सँधै सूर्यको संरक्षण हुनै पर्छ। भिजेको र दाग लाग्ने बच्चाहरूको लागि सही कपडा र स्पेयर कपडा ल्याउनुहोस्। र मुख्य कुरा, तपाईको साथ यी अनुभवहरूको आनन्द लिनुहोस्।
किनभने सम्झनुहोस् ... सम्झनाहरूमा लगानी गर्नुहोस्, त्यो समय फिर्ता हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आज आमाहरू » परिवार » सुझावहरू » वसन्त childrenतुमा बच्चाहरूसँग गर्ने योजना
के यो सम्बन्ध विच्छेद मार्फत जाने समय हो? Decide प्रश्नहरू तपाईलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्न
बच्चाहरूसँग गर्न पानीको प्रयोग